Indlela ukupheka kutyu yonke imithetho? Indlela Yokuthola Kuti
Ngokungangabazeki, iholide engcwele kakhulu woke amakholwa - lokhu ngoKhisimusi. Ngalolu suku, abantu bezigaba ezingafani futhi amakilasi babuthana ndawonye etafuleni ngidla, wathokoza ukuzalwa kukaJesu Kristu. Futhi kungakhathaliseki acebe kangakanani noma babe Decor nesizotha futhi izitsha, indishi kwaba kutia noma, njengoba babeyibiza kanjalo le wakhe, futhi kolivo sochivo. Kwakuyisikhathi ingxube okusanhlamvu, kuphekwe ne ukwengeza uju kanye ne-royal jelly poppy. Futhi indlela ukupheka Christmas Pudding ukhisimuzi esikhathini sethu, funda elula.
iposi Engcwele kudinga ngokukhethekile nokuhambisana ngaphambi Christmas, kodwa ukubonakala wokuqala inkanyezi izivakashi baqala ukuletha etafuleni izitsha zemikhosi. Nokho, kule kukhona inqubo saziso.
Ngakho, owokuqala ukhonza iphalishi zendabuko, okwenza Sekuyisikhathi eside ube isiko kuwo wonke amaKristu. Nokho-ke has a izimpande okuningi lasendulo ukuthi ukhulise kusukela isikhathi yasendulo. Into wukuthi esikhathini eside esidlule, kwakucatshangwa ukuthi ngesikhathi sokuzalwa sengane umzuzwana Uphakamisa umgubuzelo phakathi imihlaba we abaphilayo nabafileyo, ngakho ihlonipha okhokho iyona efanele kakhulu kule esifushane. Njengoba Christmas kwaba iholide kuphela ehlanganisa kokubili ukuvela entsha bese pominovanie ukhohliwe, kodwa iningi izitsha eyayigqoke umqondo othile.
Oh okhokho kwazi kahle ukupheka kutyu ngokufanele Christmas, ngoba ingxenye ngayinye kwaba nenjongo yayo: corn iphalishi - amandla evundile yomhlaba, ukumhlonipha njengoba unina wazo zonke izinto eziphilayo; ubisi poppy uju - ubumnandi zokuphila nezinto eziningi, kanye ezulwini athi angamaKristu; nati amagilebhisi omisiwe - umthombo wezempilo kanye nenhlalakahle. Ngakho, e-kutia ekupheleni zimunye zonke izinzwa ukuqhubeka uhlanga lwesintu. Futhi ngenxa yokuthi abantu basendulo babekholelwa ukuthi acebile kuyoba ingxenye iphalishi isiko, ngcono futhi akhiqiza kakhudlwana kuyoba ngonyaka ozayo ngabo.
Uma sikhuluma incazelo lucebe kwegama elithi "kutya", kwaba umthombo wasendulo ngesiGreki «kukkia», okungase elihunyushwe ngokuthi "corn abilisiwe." Elinye igama lakhe - "sochivo" - linencazelo elula - "juice zangena, namanzi", kanti eyesithathu igama izitsha - "kolivo" - lisuselwa izithelo lasendulo «kolibo», okuyinto yondliwa ngamabele njengeminikelo yokushiswa umngcwabo okhokho.
Isikhathi umehluko yenza ngokwayo wazizwa
Lamanje iresiphi Kuti Christmas, yebo, yehlukile bomdabu njengoba yokudla komuntu futhi ububanzi imikhiqizo washintsha ngokucacile futhi ahlanganiswe eminyakeni ezayo. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi yezingxenye ezisemqoka zihlala zinjalo. Ekuqaleni okulungiselelwe kusuka irayisi, i-rye, ukolweni, ibhali nebhali nge omisiwe amantongomane, candies, jellies, sezimoto, izithelo ezomisiwe kanye nezinye izingxenye amnandi futhi elungisiwe. Nokho, indlela ukupheka kutyu sibonga imikhiqizo okuningi? Yiqiniso, ngokuvumelana izintandokazi yabathandekayo babo. Okuncane ahlelelwe le okusanhlamvu ikakhulukazi - lonke kakolweni ngaphandle husk (1 inkomishi), ama-poppy walnuts (100 g), uju (1-3 wezipuni). Ngokukhethekile, ungakwazi ukwengeza omisiwe alimondi izingcezu izithelo.
Ukuze kulungiswe kwesokudla esihlwabusayo sochivo kakade kusihlwa kufanele ahlanze kakolweni okusanhlamvu kanye cwilisa kuwo amanzi amaningi, futhi ekuseni gaya poppy ukukhiqiza ubisi, amantongomane ochotshoziwe uqhubeke ngqo iphalishi. Lokho kwaba elithambile, okusanhlamvu kudingeka ukupheka isikhathi eside (amahora ambalwa nje) on ukushisa low. Bese ukuze ungeze pan efanayo futhi uhlanganise endishini ehlukile enkulu nge poppy imbewu ubisi, uju namantongomane noshukela ukunambitha. Kubalulekile ukuthi liphalishi wahlala ketshezi, yilo ukungaguquguquki we sochivo bendabuko.
Manje uyazi ukuthi ukupheka kutyu iresiphi elula, kodwa futhi ukuba banikezwe ukudla kubaluleke eside. Ngakho, kutyu kufanele zithunyelwe ku ubumba izinkomishi ezijulile niwudle ngesipuni, libutha ngaphezulu. Ngemva kwakho konke lokhu lokudlela - uphawu ubunjalo ezinothe kakhulu, futhi kufanele udwebe umcebo walo ubumnandi kanye nenhliziyo emnyama.
Inketho elayisi: esigabeni sokuqala
Nokho, kukhona esinye iresiphi. Manje sizokubonisa indlela ukupheka irayisi kutyu. Ngenxa yalesi sidinga 1 inkomishi irayisi futhi poppy, isigamu inkomishi omisiwe nama-alimondi, kanye uju kanye noshukela ukunambitha. Thina siqale evamile: irayisi ukuhlela kusukela husks futhi amatshe amancane, wageza kahle, wafaka encane sensimbi cauldron (ukudla kuwo uthola ukunambitheka homey ngaphezulu bright) nigcwalise wona nge amanzi ukuze ketshezi ihlanganisa ngokuphelele utshani futhi yedlule ke-1 ndlela yokuhlasela yokuhlanganisa izihlangu. Thina wagqoka umlilo omkhulu futhi isivalo ajar imenze ngamathumba. Ngokwesilinganiso, kuzothatha 5-10 imizuzu. Khona-ke, lapho zaburlit amanzi, ukuhumusha ibe okungenani emlilweni, uvalwe uvale lid upheke kuze ukunyamalala ngokuphelele ketshezi. Ekugcineni, thina ukuvala igesi futhi sizame ukuthola umsungulo wasinikeza yenza ukuze uthole enye i ngekota yehora.
Isigaba sesibili kanye lokugcina
Manje, uma ufuna ukufunda indlela ukupheka irayisi kutyu, kumelwe ukhumbule iphuzu elandelayo. Lena okusanhlamvu okuthambile kakhulu ukuthi ine ukunambitheka kodwa ayikhanyi kakhulu futhi angabacwasi ethize, ngakhoke kudinga ukulungiselelwa ngokucophelela inhlanganisela eminye neminye imikhiqizo ukuba sochivo zethu zakhula zaba abantu abakahle.
Ngakho kuqala ugaye alimondi zibe okuyigugu amancane thina ucabange ukuthi ubhekene epanini. Manje engeza nalokho omisiwe scalded ngamanzi abilayo, nelayisi abilisiwe, ushukela kanye ingcosana yamanzi (kusuka iketela ostuzhennoy egumbini lokushisa). Ngomusa ukuyaluza ngiwunike ngaso sonke isikhathi, njengoba silungiselela ubisi mafutha. Ukuze uligcwalise poppy amanzi abilisiwe isilinganiso 1: 1 futhi bavunyelwe ukuba sikhukhumale for 1-2 amahora. Ngokulandelayo, sitshelwa ngo shift kube nasekwenzeni wathatheka, kancane kancane wanezela amanzi ngaphezulu (ekugcineni kumelwe ashiye 1-2 iingobho zamanzi). Manje ngawakhamela poppy, thina nokususa ke enkomishini encane Ceramic futhi ungeze lokhu uju liquid kanye noshukela ukunikeza ukunambitheka emnandi amnandi.
Inketho 3: ngebhali groats
Njengoba manje nikwazi ukupheka kutyu kakolweni nelayisi, singakwazi kuphela ufunde iresiphi yayo nge zebhali okusanhlamvu, okwenza sidinge wezipuni 2 kuphela. Futhi ngaphezu ke kumele 3 amalitha amanzi, 1 inkomishi poppy, 6-7 wezipuni uju kanye 2-5 - ujamu. Okokuqala ugeze ibhali ngamathumba phezu emlilweni ophansi, njalo wahlanganyela ekukhipheni Foam kwakhiwa. Manje, uma uqaphela ukuthi lokudla olwenziwe babe okusaluketshezi, ngokushesha sokukhipha amanzi, ukushintsha ukudla, engeza ubisi upheke kuze ithenda, ibangele njalo. Khona-ke uvala ekushiseni epha phisa imizuzu 5 ngesikhathi sihlangana poppy, pre-ofakwe amanzi, efana iresiphi, lapho safunda ukupheka irayisi kutyu.
Thina dlulelani esinyathelweni lokugcina: uhlanganise ibhali, ubisi poppy, uju kanye omisiwe lifudumeza ke ngobumnene cishe 5 imizuzu nge elishukumisayo eqhubekayo, bese bevala ngesivalo futhi anikeze phisa cishe imizuzu engu-15 Ngaphambi kokuthumela izivakashi kutyu inkathi ne jam yayo okumnandi. Yiqiniso, lokhu iresiphi kungaba njalo enothisa izixazululo zabo zokudala. Ngokwesibonelo, ungathola ihlanganisa izinto ezithi izinhlobo eziningana of nati, noma ukusetshenziswa esikhundleni ujamu isiraphu, futhi ngaphambi kokukhonza, ukuhlobisa isidlo nge izithelo ezisanda kukhiwa, izithelo candied futhi amabhilikosi omisiwe, nabezokudla izosetshenziswa futhi amajikijolo amnandi. Khumbula ukuthi konke kuncike emcabangweni wakho namakhono Culinary, ngoba kudingeka balungiselele Christmas injabulo ngenakugwemeka!
Gribovnitsa amakhowe eqandisiwe
Ukuhlobisa ikhekhe ekhaya usebenzisa imikhiqizo elula
Silungiselela ukudla okumnandi phezu hlupha. zokupheka elula original
Pancake eyayigcwele ofakwe abahlukahlukene.
Kanjani ukuze ufunde ukuze ujike ibhola ngomunwe wakhe? Into esemqoka - aim futhi kanzima ukuba athuthele!
Portrait of Tchaikovsky - isipho esikhulu abayinzalo
Ubani futhi siyini lukwazi ukushukumisa. Le ndoda, isithombe noma ukugqugquzela isinyathelo isici?
Inja nomlomo Pose Down: incazelo, ukusebenza amasu kanye nokubuyekeza
'Pantovigar'. Ukwakheka, izimpawu
Ukuziphendukela kwemvelo nokuguquguquka kwemvelo: ukufana nokungafani
Trooper - isosha elite. incazelo lokubikezela
Zitshala raspberry: amathiphu ambalwa
I-Daguerreotype iyisibuko esinememori, ukuveza umlando kanye nobuciko obukhohliwe.